Global Voices teny Malagasy » Israel: Manohana ireo mpiasa mitokona mitaky ny zony ny mpitoraka bilaogy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Mey 2009 12:08 GMT 1	 · Mpanoratra Carmel L. Vaisman Nandika Lila
Sokajy: Israely, Hafanàm-po nomerika, Sendikà
Anankiray amin'ny zavatra tena hifantohan'ny mpitoraka bilaogy Israeliana ny fitakian-jo ataon'ireo mpiasa. Taona vitsivitsy izay dia sindikan'ny mpiasa maro miasa amin'ny sehatra tsy miankina toy ny mpandroso sakafo any amin'ny café, ny mpiambina, ny mpanao gazety, no namahana bilaogy ho fitakiana ny zony ary nahavita namorona ady hevitra matanjaka sy nahazo fanohanana tamin'ny mpitoraka bilaogy.
Amin'izao fotoana izao dia zavatra 2 no mibahana ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Israeliana: ny fanohanana ny mpampianatra ao amin'ny anjerimanontolo ho an'ny daholobe, izay efa nitokona nandritra ny 5 herinandro izay. Fitokonana izay hita taratra sahady fa ho ela vao hisy vahaolana; sy ny fitsipahan'ny AMPM(Fikambanan'ny mpivarotra fanafody sy ny super marchés any Tel Aviv) izany fitokonana izany satria tsy mba manaja ny lalànan'ny asa mantsy izy ireo.
Ny anjerimanontolo ho an'ny daholobe no anjerimanontolo lehibe indrindra any an-toerana satria misy mpianatra 42 000 sy mpampianatra 1300. Raha tsy niresaka intsony ny momba ny fitokonana ny gazety mahazatra taorian'ny 2 herinandro dia mpitoraka bilaogy Israeliana maherin'ny 30 kosa no nanohy izany mba hanome hafanana ny fitakiana sy ny ady hevitra.
Nanoratra tao amin'ny bilaoginy i Keren Fite, manam-pahaizana ambony amin'ny literatiora anglisy:
“Nandritra ny 13 taona dia noheveriko fa tsy nanam-pidiny aho: tsy afaka nandray ahy ny anjerimanontolo raha tsy feno ny isan'ny mpianatra hanatrika ny fampianarako satria manana hevitra ekonomika niainany izy. Vokatr'izany dia herinandro monja alohan'ny fanombohan'ny 6 volana hampianarana aho no ampandrenesina, ary mitaintaina foana raha handray karama indray amin'ny volana manaraka. Vokatr'izany ihany koa dia voaroaka aho isaky ny vita ny 6 volana ary miandry indray na mbola horaisina (na tsia).
Kanefa tsy raharahan'ny anjerimanontolo ny momba ahy: tsy mahazo marary aho ary tsy nandray fanampiana ara-tsosialy mihitsy, ary rehefa bevohoka aho dia tsy havaozina intsony ny fifanarahana hiasa ho amin'ny 6 volana manaraka.
Amin'izao fotoana izao raha mitokona aho dia tsy hajain'ny anjerimanontolo ny zoko hitokona sy hanao tsia amin'ireo zavatra mampietry voninahitra ataony ireo. Hatramin'ny nanombohan'ny fitokonana dia nahazo hafatra fampitahorana aho manery ahy hilaza fa raha mitokona aho dia tsy mandray karama. Raha atao amin'ny teny hafa dia hoe, fantatr'izany ireo tsara fa ao ny foto-pivelomako ary andrasany izay hahatonga ahy ho noana tsara dia mijanona ho azy tsy manao fitokonana intsony avy eo.
Noho izany, ny anjerimanontolo natao ho an'ny daholobe hahazoan'ny rehetra mianatra amin'ny ambaratonga ambony no tsy manome asa sahaza ho ahy sy ny manakana ny zoko tsy hiaina ara-dalàna.”
Manoratra ao amin'ny bilaoginy i Labyrinth:
“Mety hihemotra ny fanadinana, mety hihena ny naotiko na koa ato anatin'ny 1 volana dia mety ho sempotry ny fanenjehana ny tsy vita aho. Kanefa efa miomana koa fa ny mpampianatra dia miala sasatra kely anelanelan'ny fampianarana sy ny fanadinana, satria hiakatra kely ny karaman'izy ireo. Afaka manoro hevitra ny namako aho hanantona koa ireo mpampianatro ireo mba hahazoan'izy ireo asa tsy voaelingelina ka afaka miantoka ny 6 volana. mety hiseho koa ny hoe hisokatra amin'ny sindikan'ny mpiasa matanjaka kokoa ny sindika, amin'ireo toeram-pianarana ambony tsy miankina izayhiharan'ny zavatra iainanan'ny anjerimanontolo koa.
Angamba indray andro any raha tonga eo amin'ny toeran'izy ireo aho (izany no faniriako…) dia ho sambatra aho satria nandray anjara tamin'ny fitokonana, satria hiainako tokoa amin'izany fotoana izany ny ady nataoko”.
Manampy izany koa i Tomer Reznik ao amin'ny bilaoginy:
“Raha nanontany tena aho hoe ahoana no fomba hanoratako zavatra mahaliana mikasika ny zo fototra (fifanarahana iombonana, fiahiana eo ami'nny asa…) dia taitra tampokatamin'ny fitakian'ny mpampianatra aho: tsy maintsy mamaly ny fitakian'izy ireo ny anjerimanontolo ary hampitsahatra ny fitondrana azy ireo ho toy ny mpisolo toerana!”
Milaza i Limor64, mpikambana ao amin'ny fikambanan'ny mpampianatra ao amin'ny anjerimanontolo efa ho 11 taona izao:
“Tsy te ho fitaovana hanamaivana ny anjerimanontolo intsony izahay. tena miroborobo ny anjerimanontolo natao ho an'ny daholobe, kanefa izany fahombiazana izany dia avy amin'ny fianarana ny maha olona. Tsy nandray karama izahay efa ho 5 herinandro izao, tsy azo antoka ny ho avy amin'ny 6 volana manaraka, kanefa mihevitra toeram-piasana tsaratsara kokoa izahay amin'ny ho avy. Tena zava-dehibe mihitsy amin'izao fotoana izao ny zo eo amin'ny asa, ary iraisam-pirenena izany, satria ny mpiasa no manentsina ny lavaka vokatry ny krizy ekonomika eo anatrehan'ny mpampiasa sy ny governemanta”.
Manampy ireo mpitoraka bilaogy ireo dia misy fiarah-mientana koa ao amin'ny Facebook. ny iray amin'ireny, Roy Chicky Arad, mpanao gazety sady mpitoraka bilaogy tafiditra ao amin'ny mpanohitra-kolotoraly, no nampanao fifaninanana mamaky ilay tononkalo mitondra ny lohateny hoe “Anjerimanontolo filamatra”, natao ny 12 may lasa teo manoloana ny tranon'ny lehiben'ny anjerimanontolo ho an'ny daholobe.
Andro vitsivitsy lasa izay dia fanentanana fanoherana ireo fivarotam-panafody no nataon'ireo mpitoraka bilaogy: tsy mividy zavatra intsony any amin'ny AMPM vokatry ny heloka bevava nataony izay ny mpiasa ao aminy ihany no voa mafy, mpiasa jiosy-etiopiana ny ankamaroany.
Ilay mpitoraka bilaogy, Sharon Gefen , niandohan'ny hevitra tsy hividy any no nanoratra:
“Tsy fantatro ny fanaony amin'ny fampitomboana faktiora na ny fitomboan'isany tsy an-kijanona ka manery ireo mpivarotra tantanan'ny fianakaviana hikatona, fa tsy zakako fotsiny ny hoe manitsakitsaka ny zon'ny mpiasa izy ireo. Ohatra fotsiny, raha sendra tara ny mpandray vola dia mandoa lamandy 15 shekels. raha tsy tonga miasa dia mandoa 45 shekels, izay avo 2 heny amin'ny karamany. Ampy izay. Aleoko ihany mividy sigara( ronono, mofo…) any amin'ny toeran-kafa, indrindra fa hoe mahatsapa ny rehetra fa “Tsara ny miaina eto an-tanàna” araka ny sora-baventy fanevan'ny AMPM, na dia mpiasa ao aminy aza izy ireo ”.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/05/30/2418/